I-Casa Lusitana I, amamitha angu-150 ukusuka ogwini - I-Airbnb
I-Casa Lusitana I, amamitha angu-150 ukusuka ogwini
Porto Côvo, i-Portugal
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Paulo
U-Paulo Ungumbungazi ovelele
Indlu yaseLusitana, T3, etholakala enkabeni yomlando yasePorto Côvo, endaweni ethule, cishe amamitha angu-50 ukusuka enkabeni namamitha angu-150 ukusuka ogwini.
IPorto Covo iyindawo yokudoba kanye nezivakashi, edume ngamabhishi aso anesihlabathi esihle esimhlophe, phakathi kwamawa. Amanzi akhona acwebile futhi acebile ngezinhlanzi nokudla kwasolwandle okumnandi okujabulisa izivakashi.
I-Casa Lusitana yahlelwa futhi yakhiwa, efana naleyo esasiyibekele ukuvakasha kwethu, isonto elilodwa noma amabili. Ulwandle lwaseBuizinhos, oluqhele ngamamitha angu-150 ukusuka endlini, luhle kakhulu ekujabuleleni ilanga, ngisho nangaphandle kwenkathi yolwandle.
Isikwele esimaphakathi sasePorto Covo cishe singelinye lamakhona amukela kakhulu amadolobhana ahlukahlukene okudoba ozohlangana nawo njengoba uhamba kulolu gu. Hlala isikhashana ungene kusigqi se-Alentejo, futhi konke lokhu ngolwandle ngemuva kanye nokuqala koMzila wabadobi.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu, sivumele sethule iziphakamiso ezithile zeholide lakho. SiseCosta Vicentina kanye nokujikijelwa kwetshe ukusuka e-Costa de Tróia, isiphakamiso sethu ukuthi uvakashele zombili izinhlaka, ngoba zinezintelezi zazo ezihambisanayo. Singase futhi sincome ezinye izindawo ezithakaselayo kakhulu, kungaba ngezizathu zamasiko noma zomlando, njenge-Arraiolos, Évora, Setúbal, Sines, phakathi kwezinye.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu, sivumele sethule iziphakamiso ezithile zeholide lakho. SiseCosta Vicentina kanye nokujikijelwa kwetshe ukusuka e-Costa de Tróia, isiphakami…
Inombolo yepholisi: 80631
Hlola ezinye izinketho ezise- Porto Côvo namaphethelo